Mogadishu Journal » Spain oo noqotay xulkii Saddexaad ee ku hara wareegga 16-ka koobka adduunka kadib….
Ciyaartan oo aheyd mid aad u xiisa badan ayaa qaybteedi hore ku soo idlaatay barbato 1-1 ah oo ay labada xul kukala nasteen.
Balse qaybtii markii la isku soo laabtay ayay labada xul abuureen fursado gool noqon karay walow aysan xulna usuurta galin in uu shabaqa gaaro.
Waxaana loo baahday in ciyaarta lagu daro waqti dheeri ah kaas oo xitaa aysan labada xul kukala bixin waxaana markan la aaday gool kulaad ama rigoorooyin.
Waxaana ku soo gudbauy xulka Russia kadib marki ay dhaliyeen xidigaha ruushku 4-rigoore oo ay tuurteen halka xidigaha isbaanishka ay laba rigooro iska qasaariyeen kuwas oo ay qasaariyeen xidigaha ramos iyo aspas, taas oo kadhigan in ay ruushku u gudbeen wareegga xiga iyaga oo la ciyaari doona xulalka England iyo Colombia midkii barritto so gudba.